Madaxda dowlad goboleedyada oo kulamo kala duwan ka wada Muqdisho – Banaadir Times
By banaadir 26th May 2021 59 No comment
Madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada ee Magaalada Muqdisho u jooga ka qeyb galka shirka Arrimaha doorashooyinka ee ka socda Xerada Afisiyooni ayaa kulamo kala duwan waxaa ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku qaabilay Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka DFS, Haweenka Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, iyo haweenka bulshada rayidka ah.
Kulanka ayaa looga hadlay ilaalinta qoondada Haweenka Soomaaliyeed ee Doorashooyinka iyo sidii loo tixgalin lahaa cabashadooda.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa kulan la qaatay hormuudka haweenka Soomaaliyeed ee ku jira golayaasha kala duwan ee Dowlada iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ka qeybgalka haweenka ee arimaha Siyaasada.
Maalinta Berito oo Khamiis ah ayaa waxaa la filayaa in Magaalada Muqdisho lagu soo geba-gabeeyo shirka wadatashiga Arrimaha doorashooyinka ee ka socda Magaalada Muqdisho.
Majaajiliiste Sooraan oo ku geeriyooday Burco
Golaha Ammaanka ee QM oo Maanta shir ka yeelanaya xaalada Soomaaliya